'Labyrinth' na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri maka ncheta afọ 35 ya!
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Labyrinth' na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri maka ncheta afọ 35 ya!
by Waylon Jọdan August 5, 2021
by Waylon Jọdan August 5, 2021 36,118 echiche
Ihe nkiri efu nke Jim Henson Labyrinth ga -alaghachi na ụlọ ihe nkiri ọdịda a na mmemme ncheta afọ 35 ya n'ihi Fathom Events.
N'ịkọ Jennifer Connelly na David Bowie, ihe nkiri a na -akọ akụkọ banyere nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma aha ya bụ Sarah onye na -achọ nwanne ya nwoke na mberede n'aka Jareth, Goblin King nke ụlọ ya dị n'obi nke gbagọrọ agbagọ, na -atụgharị labyrinth. Ka ọ na -aga ịzọpụta nwa ahụ, ọ na -amụta nkuzi gbasara ọbụbụenyi, ntụkwasị obi, na ike nke onwe ya na ike ya n'ụzọ.
Akụkọ ifo gbara ọchịchịrị bụ otu n'ime ihe nkiri na -ahụkarị ụdị ya site na 1980s, ikekwe naanị Henson meriri ya. Ọchịchịrị Ọchịchịrị.
Connelly na Bowie dị ka Sarah na Jareth, Eze Goblin.
“Otu n'ime aha anyị na -arịọkarị, Labyrinth na -enwe nnukwu onye ofufe nwere mmasị, "Tom Lucas kwuru, Onye isi oche ihe omume Fathom nke Onye Mmekọrịta Studio kwuru. "Obi dị anyị ụtọ iweta onye ọkacha mmasị a sitere na ụlọ ọrụ Jim Henson na sinima na mba niile, ọkachasị maka ncheta afọ 35 ya."
Labyrinth Jim Henson duziri ya na edemede nke Terry Jones nke Monty Python ama. Brian Froud jere ozi dị ka onye nrụpụta echiche na ọrụ ahụ yana George Lucas dị ka onye isi na -emepụta ihe. Trevor Jones dere akara ahụ na Bowie nyere egwu ihe nkiri ahụ gụnyere "Dance Dance" a na-ekwukarị.
Tiketi maka Labyrinth ga -ere ire echi, Fraịde, Ọgọst 6, 2021, na mgbede webụsaịtị Fathom Events. A ga -emecha ihe nkiri ahụ Ọnwa Itolu 12, 13, na 15, 2021.